Dala Isicwangciso Sokuthola - Fyrebox
Yenza eyakho imibuzo ngeWebhusayithi yakho noma i-Blog
Dala imibuzo ukuze ukhiqize okuholela, ukufundisa noma ukumane uhlanganyele izithameli zakho.
Thatha UhamboDala Isicwangciso Sokuthola
Imibuzo eyodwa, amafomethi amabili
Ukudala imibuzo kungasiza ibhizinisi lakho
Yenza umbuzo wakho ukukhiqiza okuholela. Noma ngabe ukuhola kwakho kuyibhizinisi lebhizinisi noma lebhizinisi kumthengi, imibuzo iyindlela enhle yokukhiqiza ukuhola kuwebhusayithi yakho, ikhasi lokufika noma kumidiya wokuxhumana nomphakathi.
Ungathumela imininingwane eqoqwe ngumbuzo wakho ngokuzenzakalelayo kwizicelo ezingaphezu kwama-300.
Isikrini sokugcina sombuzo wakho singasetshenziswa ukukhuthaza isenzo. Isibonelo, ungashayela ithrafikhi ekhasini lakho le-Facebook, noma kwelinye ikhasi lewebhusayithi yakho.
DALULA UMBUZO WAKHO OBANGO
Imibuzo ingafundisela noma yini kubafundi bakho. Kusuka esikoleni samabanga aphansi kuya eyunivesithi, kwakha kwenza imfundo ibandakanyeke futhi kube mnandi. Ungahlola futhi ulwazi lwabafundi bakho bese ufinyelela imiphumela yabo ngesikhathi sangempela.
Imibuzo yakho iqopha ngokuzenzakalela abadlali be-Imibuzo yakho nezimpendulo zabo.
Ungakhetha ukuthola umbiko ngomdlali ngamunye noma ubathumele bonke
Emibikweni, uyakwazi ukufinyelela izimpendulo zabadlali, isikhathi abasichithile kwimibuzo yakho nesikolo sabo.
Konke odinga ukukwazi mayelana nokwenza umbuzo
Izibalo zemibuzo yakho ziyatholakala ngesikhathi sangempela Zikhonjiswa kumashadi wephayi ukukusiza uqonde idatha ngokushesha futhi kalula
Kusetshenziswa imibuzo yakho njengenhlolovo ezisebenzayo
Izibalo ziqoshwa ngokuzenzakalelayo. Inani labadlali (abaphumelelayo nabangaphumelelanga) kanye nenani eliphelele labadlali liyatholakala ngesikhathi sangempela. Izibalo zombuzo ngamunye ziyatholakala.
YENZA UMBUZO WAKHO OWAMAHHALA